Abuu-Mansoor:-” Annagu shirka Asmara majoogno iney wax kasoo bexeena uma aragno ee anaga gudaha Soomaaliya ayaan joognaa oo ka dagaalannaa. | JILYAALE_ONLINE
July 2010 December 2008 August 2008 July 2008 June 2008 March 2008 February 2008 January 2008 December 2007 October 2007 September 2007 August 2007 July 2007 June 2007 May 2007 April 2007 March 2007 Abuu-Mansoor:-” Annagu shirka Asmara majoogno iney wax kasoo bexeena uma aragno ee anaga gudaha Soomaaliya ayaan joognaa oo ka dagaalannaa.
October 3, 2007 by jilyaale	0
Abuu-Mansoor oo Mucaaraday Xubnaha Asmara oo ay kujiraan Maxkamadihii Islaamka ee uu kamidka ahaa
Halkaan ka Dhageyso wareysiga Abuu-Mansoor
Sheekh Mukhtaar Rooboow ayaa si weyn uga soo horjeestay in ay isku mid yihiin iyaga iyo kooxda Asmara ee ay kamid yihiin xitaa Golihii Maxkamadaha Islaamka ee uu kamid ahaa isaga iyo kooxda Alshabaab.
Abuu-Mansoor ayaa sheegay in madaxda Al-shabaab ay joogaan gudaha dalka Soomaaliya, balse cid kamid ah ama katirsan kooxda Al-shabaab eysan jirin dibada.
Abuu-Mansoor ayaa yiri ” Anagu shirka Asmara majoogno iney wax kasoo baxaayaanna uma aragno ee gudaha Soomaaliyaan joognaa oo kadagaalanaa.
Mar wax laga weydiiyay waxa ay kudiiiyayaan go´aanada kasoo baxay shirka Asmara ayaa wuxuu yiri Abuu-Mansoor ” Walaaloow nin raba inuu dalka wax uqabto waa inuu joogaa gudaha oo kadagaallamaa, nin bannaankaas joogoo aan gaaladaan xabad kurideyn hada wuxuu soo kordhinaayo maleh, awalba waxaan ku heshiinay in aan wax kumaamulno Shareecada Islaamka kuna taagnaano, ee inaan meelahaas aadno oo Hoteela fadhiisanoo kahadalno waajibkeena maaha.
Sidoo kale Sheekha wuxuu kahadlay Dabkii laqabadsiiyay Suuqa weyn ee Bakaaraha, iyo cida kadambeysay.
Sidoo kale wuxuu kahadlay weeray ay ku qaadeen Meela badan ee ay deganaayeen Ciidamada Ethiopia iyo kuwa Dowladda KMG ah.
Wuxuuna sheegay in ayaga dhinacooda ay kadhinteen 2 Ciidamada Shabaabka ah halka uu sheegay in Ethiopian-ka ay 5 uga dhinteen Ciidamada Dowladana uu sheehgay illaa 12 kadileen.
← Warsaxaafadeed uu soo saaray Isbahaysiga Dib u Xoreynta Soomaaliya oo ku saabsan Xaaladaha cakiran ee sii xumaanaya ee ka jira dalka Soomaaliya.	Xiladhibaanadda Barlamaanka KMG ah oo u diyaar garoobaya codbixin loo qaadi doono Dowladda uu hoggaaminayo Ra’isul Wasaare Cali Maxamed Geedi. →